Wararkii ugu Danbeeyay Maamul u Sameynta Gobolada Jubooyinka iyo Halka ay Marayaan
Home Somali News Wararkii ugu Danbeeyay Maamul u Sameynta Gobolada Jubooyinka iyo Halka ay Marayaan
Wararkii ugu danbeeyay ee maamul u sameynta kismaayo ayaa sheegaya in meel gabagabo ah ay mareyso dadaalada lagu doonayo in maaul rasmi ah loogu sameeyo maamulka Jubooyinka.
Bishaar Ismaaciil oo kamid ah masuuliyiinta urur la magacbaxay maamulka Jubba Land oo lahadlay saxaafada ayaa sheegay in dhawaan lagu wado in dhawaaqayo maamulka Jubooyinka uu si rasmi ah u yeelanayo.
Waxa uu sidoo kale sheegay Bishaar Ismaaciil oo ka mid ah Mas’uuliyiinta la magacbaxay muumulka Jubba Land in ay haatan socdaan dadaaladii ugu danbeeyay ay ku doonayaan in ay maamul ugu sameeyeen gobolada jubooyinka oo haatan jahwareer ba’an ka taagan yahay.
Waxa uuna carabka ku dhiftay in Bishan gudaheeda lagu dhawaaqayo oo iminka hardankeeda lagu jiro,isagoona hoosta ka xariiqay in dhamaan beelaha kala duwan ee jJubooyinka ay isku raaceen in maamul rasmi ah loogu sameeyo gobolada Jubooyinka.
Bishaar Ismaaciil ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in shacabka Jubooyinka dhawaan ay ku qancin doonaan waxyaabo ay ku farxaan oo aanay ilaabi doonin,
Hadalka ka soo baxay Bishaar Ismaaciil oo kamid ah masuuliyiinta urur la magacbaxay maamulka Jubba Land ayaa ugu danbeyntii waxa uu shaaca ka qaaday in maalmaha soo socda ay ku soo wajahan yihii kismaayo oo ah xudunta Jubada Hoose iyagoona kulumo la qaadan doonaan Maamulka ka jira halkaasi,